Mareykanka oo sheegay in la weeraray markab dagaalka oo ay leeyihiin - BBC News Somali
Mareykanka oo sheegay in la weeraray markab dagaalka oo ay leeyihiin
Image caption Markabka dagaalka ee USS Mason
Saraakiisha difaaca Mareykanka, ayaa sheegay in markabka dagaalka Mareykanka ee la geeyay Badda Cas meel ka baxsan Yemen, ay suuragal tahay in lala beegsaday gantaal gudaha ka yimid. Hadii taa la xaqiijiyo, waxay noqoneysaa dhacdadii saddexaad oo dhacda maalmihii dhawaa.
Markabka dagaalka ee USS Mason, ayaa ka hortagay in la duqeeyo. Khamiistii ayey militeriga Mareykanku sayruuq ku weerareen saddex goobood oo ay yaalaan radaarada xeebaha ilaaliya oo ku yaal dhulka ay xukumaan falaagada Xuutiyiinta Shiicada.
Sabtigii ayuu xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry sheegay, in falaagada Xuutiyiinta Yemen ay soo daayeen labo muwaadin oo Mareykanka ah oo ay haysteen. Labadaasi ruux oo aan magacooda la sheegin ayaa loo duuliyay dalka dariska la ah ee Cumaan.